Teleprospecting ကိုဘယ်သူပိုင်ဆိုင်သလဲ။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 19, 2016 အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 19, 2016 Jenn Lisak Golding
ခဲ - ဝယ် - ဝယ်၏ယုတ္တိတိုးတက်မှုကဘာလဲ?
အကယ်၍ သင်ဤမေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်မဖြေဆိုနိုင်လျှင် နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်သဘောတူစာချုပ်ကိုခင်ဗျားကစားပွဲပေါ်ကိုချန်ထားပါတယ်။ အဲဒါအများကြီး။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးများသည်မည်သည့်အခါမျှရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ
ပုံမှန် Lead တိုးတက်မှု ပုံစံ Lead တိုးတက်မှု
စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ရောင်းအားကို ဦး တည်သည်။ စျေးကွက်နှင့်အရောင်းသည်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရည်အချင်းများကိုသဘောတူသည်။
အရောင်းသည်တန်ဖိုးမရှိမှုကိုဖြစ်စေသည်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်အတွင်းပိုင်းအားထုတ်မှုများမှ ဦး ဆောင်သည်။
လုံလောက်သောပျိုးထောင်ခြင်းမရှိဘဲစပျစ်နွယ်ပင်တွင်အသေခံသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်အကြောင်းအရာကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မက်ထရစ်များမှတစ်ဆင့်အပြုအမူများကို ဦး ဆောင်လမ်းပြသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်မြင်သာမှုနှင့် ၀ င်ငွေများကိုပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်သည့်အကြောင်းရင်းကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောရောင်းချမှုများကိုရောင်းချသည်။
ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်သဘောထားကွဲလွဲမှုများများစွာရှိသည်။ အပြစ်တင်ပွဲတော် ensues ။ အရောင်းသည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုခေါ်ဆိုခြင်း၊
လြျှော။ ညည်းသံ။ ပြန်လုပ်ပါ cha-Ching! သင်ဟာငွေရှာနေတယ်၊ ​​အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမဖြုန်းတီးဘူး၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သတ်ချင်နေတယ်။
အောက်ပါ infographic, ၏ယဉ်ကျေးအပေါ်ဖတ်ပါ MonsterConnect, သင်ယူရန်:
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး - အရောင်းကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအစက်အပြောက်
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်အကြားစစ်ပွဲများကိုရပ်တန့်စေပြီးအဖွဲ့နှစ်ခုလုံးကိုအနိုင်ရအောင်ပြုလုပ်ပါ။
Tags: နည်းပညာကိုခေါ်ပါဦး ဆောင်လမ်းပြစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပြင်ထွက်အရောင်းရှာဖွေရေးရောင်းအားအရှိန်အရောင်းစွမ်းအားအရောင်းသတင်းအချက်အလက်ကြေးမုံ